Tirada dadka ku dhintay rabshadaha Ciraaq oo sare u kacday | Xaysimo
Home War Tirada dadka ku dhintay rabshadaha Ciraaq oo sare u kacday
Waxaa aad sare ugu kacay tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda Ciraaq ee afartii maalmood ee la soo dhaafay dalkaasi ka dhacayay kuwaas oo gaaray ugu yaraan 60 qof, ilo dhinaca caafimaadka iyo ammaanka ah ayaa sidaasi sheegay.
Tirada ayaa laba laabmatay 24-kii saacadood ee la soo dhaafay, xilli ay sare u kaceen iskudhacyada u dhaxeeya dibadbaxayaasha iyo booliska.
Milateriga ayaa sheegay “shiishyahanno aanan la ogaan waxa ay yihiin” ayaa waxa ay magaalada Baqdaad ku dileen afar qof oo ay ka mid yihiin laba askari oo boolis ah.
Ra’iisul Wasaare Caadil Cabdul-Mahdi ayaa goor sii horraysay sheegay in “dalabaadka saxda ah” ee dibadbaxayaasha la maqlay, balse waxa uu dalbaday in la isdajiyo.
Dibadbaxyada aanan la sii qorshayn ayaa waxa ay bilowdeen Talaadadii xilli uu aad sare ugu kacay walwalka ka taagan shaqa la’aanta heerka sare ah ee haysata dhalinyada, adeegyada bulshada ee aadka u liita iyo musuq maasuqa dalkaasi ka hareeyay.
Arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa loollankii ugu waynaa ee ay soo wajahdo dowladdan jilicsan ee Mr Mahdi, taas oo awoodda la wareegtay sanad ka hor.
Mas’uuliyiinta Ciraaq waxay qadka ka saareen Internetka, banddow ayaa lagu soo rogay magaalooyin dhowr ah
Weriye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo ku sugnaa Ciraaq ayaa sheegay in tiro dad ah oo ka qeyb qaadanayay dibadbaxyada ay rasaas madaxa iyo caloosha kaga dhacday.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyadii shaley ka dhacay dalkaas, sida laga soo xigtay ilo wareedyo caafimaad iyo laamaha amniga.
Dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa hareeyay magaalada Baqdaad gaar ahaan deegaanada ay u badan yihiin Shiicada.
Waxaa sidoo kale dhimasho laga soo tebiyay magaalada Koonfurta ku taal ee Nasiriya.
Baaritaan qarsoon oo ay BBC sameysay: Wadaaddo fasaxaya guurka wakhtiyeysan
Weriye ka tirsan Reuters oo goob joog ka ahaa dibadbaxyadii shaley ka dhacay Ciraaq
Ra’iisul wasaaraha Ciraaq, Caadil cabdul Mahdi oo markii ugu horreysay ka hadlay telefishinka qaranka wuxuu sheegay in dadka dibadbaxyada gudaha dalkaas ay xaq u leeyihiin inay codsadaan so afjariidda musuq maasuqa balse arrintaas ay qaadaneyso in muddo ah si isbaddal loogu tallaabsado.
Ra’iisul wasaaraha Ciraaq wuxuu ballan qaaday inuu isku dayi doono inuu meel mariyo sharci cusub oo dhigayo in dadweynaha reer Ciraaq ee saboolka ah inay helaan dhaqli laga maarmaan u ah noloshooda.
Ra’iisul wasaaraha wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in bandowga lagu soo roggay dalka looga golleeyahay in ammaanka loo xoojiyo si gacanta loogu dhigo dadka kusoo dhex dhuumanayo dibadbaxyaasha ee carqaladeynta wado.